အမေရိကန်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Idiom အသုံးအနှုန်းများ အပိုင်း - ၅
ဒီအသုံးရဲ့ စာလုံးပေါင်းကတော့ To Win အနိုင်ရဖို့၊ By A Landslide ကတော့ မြေပြိုတာလို့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ မြေပြိုတဲ့အခါ တောင်စောင်းတလျှောက်မှာ ရှိရှိသမျှ ကျောက်တုံး၊ ကျောက်ခဲတွေ ဒလဟော ထိုးကျလာတဲ့ သဘောဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလည်း မဲတွေဟာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူဘက်ကို အပြတ်အသတ် ဒလဟော ဆင်းလာတဲ့သဘော မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ဒီအသုံးကတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲအပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိလိုက်တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲတခုမှာ မဲအပြတ်အသတ်နဲ့ အနိုင်ရသွားပုံအကြောင်း ဥပမာကို George Grow က ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
“One race that was decided early on the election night was the senate race in Maryland. Babra Mckorsky was way ahead from the start and ended up with the real landslide over sixty percent.”
ရွေးကောက်ပွဲညက စောစောစီးစီး အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့ ပြိုင်ပွဲကတော့ မယ်ရီလန်းပြည်နယ်က ရွေးကောက်ပွဲပါပဲ။ ဘာဘရာ မက်ကောစကီး ဟာ မဲရုံစဖွင့်ကတည်းက ရှေ့က ပြေးနေပြီး မဲရုံလဲပိတ်လိုက်ရော အပြတ်အသတ်ကို အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တယ်။ ရာခိုင်နှုန်း ၆၀ ကျော်နဲ့ အနိုင်ရသွားတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
Win By The Nose
ဒီ Landslide ဆိုတဲ့အသုံးစကားနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အသုံးအနှုန်းကတော့ Win By the Nose ဆိုတဲ့အသုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Win အနိုင်ရရှိသည်။ By နှင့်၊ The Nose ကတော့ နှာခေါင်းဆိုတော့ နှာတဖျားနဲ့ အနိုင်ရရှိလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ရှင်။ ကျမတို့ မြန်မာမှာလည်း ဒီအသုံးရှိတာ သောတရှင်များ သိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကတော့ မြင်းပွဲကနေ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ မြင်းတကောင်နဲ့တကောင် အကြိတ်အနယ် အပြေးပြိုင်ရာကနေ ပန်းဝင်ဖို့ စက္ကန့်ပိုင်းအနည်းငယ်အလိုမှာ နောက်ဆုံးမြင်းက အားကုန်ဆွဲပြီး ပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာ နှာတဖျားနဲ့ကပ်ပြီး အနိုင်ရရှိသွားခြင်းပါပဲ။
ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်လို့ George Grow ပေးတဲ့ ဥပမာကို နားဆင်ကြည့်ကြရအောင်။
“Nobody gave Mrs. Greenachance to win. She was new to politics and her opponent had plenty of money for his campaign but she was very hard to get voter support and surprise us all when she won byanose.”
Mrs. Green ကို အနိုင်ရရှိလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူကမှ မထင်ထားဘူးလေ။ သူဟာ နိုင်ငံရေးလောကမှာ မျက်နှာသစ်ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ယှဉ်ပြိုင်ဘက်ကလည်း မဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှုမှာ သုံးဖို့ ငွေအင်အားကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက မဲဆန္ဒရှင်တို့ထံက ထောက်ခံမှုရရှိဖို့ မနားမနေ ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် သူ နှာတဖျားနဲ့ကပ်ပြီး အနိုင်ရရှိလိုက်တော့ ကျနော်တို့ အားလုံး အံ့အားသင့်သွားရတယ်ပေါ့ဗျာလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
စောစောပိုင်းက တင်ပြခဲ့တဲ့ မဲအပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ပြန်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ သတင်းစာလောကမှာ အသုံးများတဲ့စကားရပ်ကတော့ Clean Sweep ဆိုတဲ့ အီဒီယမ်အသုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စာလုံးပေါင်းက Clean သန့်သန့်၊ Sweep ရဲ့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အောက်ခြေသိမ်းကအစ ပြောင်နေအောင် လှည်းကျဉ်းပစ်လိုက်တဲ့သဘောဆောင်ပါတယ်။ တံမျက်စည်းကြီးနဲ့ ပြောင်နေ အောင် လှည်းကျဉ်းပစ်လိုက်သလို မြို့တမြို့ ဒါမှမဟုတ် ပြည်နယ်တနယ်မှာ ပါတီတခုက အားလုံးသိမ်းကျုံးပြီး အနိုင်ရရှိလိုက်တာကို ဒီ အီဒီယမ် ကို သုံးနှုန်းလို့ရပါတယ်။
မကြာမီက ကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲများ ကျုံးပြီးအနိုင်ရရှိလိုက်တဲ့ ပြည်နယ်တခုရဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌတဦး ပြောကြားချက်ကို နားဆင်ကြည့်ကြရအောင်။
“I’m glad to say all party won every major election in our state - Governor, US Senator or Congressman and big majority in the state legislature. It was the first clean sweep for us in the last forty years.”
ကျနော်တို့ပါတီက ပြည်နယ်ရဲ့ အဓိက ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းမှာ အနိုင်ရရှိလိုက်တဲ့အတွက် ကျနော့်အနေနဲ့ ၀မ်းသာမဆုံးဖြစ်မိတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးအပြင် ပြည်နယ်ဥပဒေပြု အဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တွေမှာလည်း မဲအများစုကို ရရှိလိုက်တယ်လေ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄၀ အတွင်းမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကျနော်တို့အတွက် အောက်ခြေကနေ သိမ်းကျုံးပြီး အနိုင်ရရှိလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
သောတရှင်များကို ဒီသီတင်းပတ်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ တင်ပြခဲ့တဲ့ အီဒီယမ်အသုံးတွေကတော့ - To Win By A Landslide, Win By The Nose, Clean Sweep တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ နောက်သီတင်းပတ် အခုလို အချိန်မျိုးမှာလည်း နောက်ထပ် အီဒီယမ်အသုံးတွေကို တင်ပြပေးဦးမှာမို့ စောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါရှင်။